सुशीलको सम्पत्ति (विचार) :: Press Chautari ::
सुशीलको सम्पत्ति (विचार)
पत्रकारिताका विद्यार्थीका लागि म्यान बाइट्स डग एक किसिमको गुरुमन्त्र नै मानिन्छ । यो मन्त्र कसले बनाएको हो, त्यो त थाहा छैन, तर यसको श्रेय वेलायती अखबार टाइकुन अल्फ्रेड हामसर््वर्थ र द न्युयोर्क सनमा कार्यरत दुई महान अमेरिकी पत्रकार जन बोगार्ट र चाल्र्स एन्डरसन डानाबीच बाँड्ने गरिन्छ । यो मन्त्रलाई थप परिस्कृत गर्दै सन् १८८२ मा डानाले एउटा वाक्यमा रुपान्तरण गरिन् , जब कुकुरले मान्छेलाई टोक्छ, त्यो समाचार हैन तर, जब मान्छेले कुकुरलाई टोक्छ, त्यो समाचार हो । यो वाक्य उनकै नाममा रहेकाले यस मन्त्रमा उनकै बढी हकदाबी लागेको जस्तो देखिएको छ । जे होस् मान्छेले कुकुरलाई टोक्दा समाचार बन्छ भन्ने प्याराडाइममा आधारित यो मन्त्र आज पनि पत्रकारितामा त्यतिकै काम लाग्छ । हरेक अनौठो घटना समाचार बन्छ भन्ने अर्थमा आज पनि यो समाचारको एउटा परिभाषाकै रुपमा पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति तीनवटा मोबाइल सेट
गत साता यही शीर्षकमा म्यान बाइट्स डग पत्रकारिता नेपालमा भयो । नहोस् पनि कसरी र ? जबकि मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँग जम्माजम्मी सम्पत्ति नै तीन थान मोबाइल हुन्छ । अझ, त्यसमा पनि एउटा त निक्कै पुरानो भएर नचल्ने, दुइवटा मात्र चल्ने भनेपछि त समाचार नहुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीको सम्पतिका रुपमा जग्गा जमीन, सुन चाँदी, बैंक ब्यालेन्स, सेयर आदिको लामो फेहरिस्त आएको भए त्यो समचार बन्ने नै थिएन । आयाराम गयाराम समाचारका रुपमा कुनै कुनामा फिलरका रुपमा प्रयोग हुन्थ्यो, सकिन्थ्यो । तर, त्यसो नभएर मुलुकका प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति नै तीन थान मोबाइल भनेपछि त समाचार नबन्ने कुरै भएन, यसमा पनि म्यान बाइट्स डग पत्रकारिता काम लाग्यो र समाचारको भेल नै आयो ।
सादा जीवन उच्च विचार, पूर्वीय दर्शनमा आदर्श जीवन प्रणाली नै हो । यसलाई अंगिकार गर्न सक्नु साह्रै राम्रो कुरा हो । अझ, त्यसमा पनि समाजका अगुवाहरुले त्यसो गर्नु समाजलाई सही दिशा दिने अर्थमा त्यो त उनीहरुको कर्तव्यभित्रै पनि पर्छ । तर, सादा देखाउने नाममा हिप्पोक्रेसी नेपाली समाजको आम प्रवृति नै भएको छ । दोहोरो मापदण्डमा चलिरहेको नेपाली समाजमा उच्च विचार त पोइल गैसकेकै हो, सादा जीवन पनि सोकेसमा सजाउने डमी नै भैसकेको छ । त्यही नभएको सादा जीवन देखाउने कसरतमा समाजका हिप्पोक्रेटहरु नानाभातीका म्यान बाइट्स डग समाचारहरुको खेती गर्छन्, गरिरहेकै हुन्छन् ।
भन्दा अप्रिय लाग्ला, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तीन थान मोबाइल सम्पत्ति पनि त्यही हिप्पोक्रेसीको चरम प्रदर्शन हो । पहिलो त, आजको समयमा सम्पत्ति भनेकै के हो ? यो आफैंमा वहसको विषय हो । चल र अचल गरेर दुई किसिमका सम्पत्ति हुने हाम्रो मुलुकमा विद्या धनम् प्रधानम् पनि भन्ने गरिएको छ । यस अर्थमा पनि सम्पत्तिको परिभाषा आफैंमा वृहद् छ । अझ, ल्याजेस्फेयरको यो युगमा सम्पत्तिलाई टेन्जिबल र इन्टेजिवल गरेर दुई भागमा बाँड्ने गरिएको छ र इन्टेजिबल सम्पत्तिलाई सबैभन्दा उम्दा मानिएको छ । त्यसमा पनि ब्रान्ड आफैंमा ठूलो सम्पत्ति हो । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग थुप्रै ब्रान्ड छन्, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको सभापति, संसदीय दलको नेता, मुलुककै प्रधानमन्त्री, कोइराला परिवारको विरासत । पहिलो त यी ब्रान्ड पार्टी, परिवार र मुलुकको अस्तित्वसँग गाँसिएका छन्, त्यसैले यिनीहरुको मुल्य कति हो भनेर आँक्ने कुरा नै गलत छ । दोस्रो प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो सम्पत्ति तीन थान मोबाइल भन्नु नै गलत छ । कि उनले मोबाइल सेटलाई सम्पत्ति नै मान्नु हुँदैनथ्यो, मानेको भए घडी औंठी, कोट, जुत्तालगायतका सामानलाई पनि सम्पत्ति मान्नुपथ्र्यो । यसो गर्दा, उनका लुगाफाटा पनि अर्कैका भन्ने अर्थ लाग्छ । यसको अर्थ के हो ? सामान्य भाषामा भन्ने हो भने यो कमन सेन्सको त कुरै छोडौं नन्सेन्स कुरा हो । आफूलाई सादा, त्यागी र लोभ नभएको उदार देखाउने नाममा यति धेरै गर्नु पनि हुँदैन र आवश्यक पनि छैन । कसले पत्याउँछ यस्तो तर्क र तथ्यले कतै नमिल्ने पागल कुरो ? यसैले यो एउटा म्यान बाइट्स डगको चरम नमूना हो । सन्की स्वभावका कोइरालाको कुनै तन्तुले यस्तो अह्राएर त्यसो गरेको भए पनि उनका घोषित अघोषित सल्लाहकारहरुले त्यसो गर्नबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ । अझ त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति आर्थिक मामला भएको र त्यसका लागि मुलुकको भण्डारबाटै तलब खाने गरी आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल नै सल्लाहकार नियुक्त भएको अवस्था हो मुलुकको । के सम्पत्ति हुने र के नहुने भन्ने बारेमा राम्रै विषयगत जानकारी राख्ने डाक्टर साहेवले प्रधानमन्त्रीलाई नांगेझार पार्ने यस्तो मिथ्यांक बाहिर आउँदा पनि के हेरेर बसे, यो आफैंमा गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । हिप्पोक्रेसीलाई पाखण्डपनका रुपमा अनुवाद गर्ने हो भने यो चरम पाखण्डपन हो र यस्तो पाखण्डपनको पाठशाला बन्द नगरे मुलुक समृद्धिको बाटोतिर लम्कनै सम्भावनै छैन ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्पत्ति विवरणको नाममा यस्तो तन्नम मिथ्यांक बाहिर ल्याउनुमा उनको दरिद्र मानसिकता त दोषी छ नै, हाम्रो समाजको दोहोरो चरित्र पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । हाम्रो समाजका बहुमत सदस्य आफ्नो लागि एउटा र अर्काका लागि अर्कै मानक स्थापित गरेर व्यवहार गर्छन् । आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाएर अर्कालाई राष्ट्प्रेमको नाममा मुलुक छाड्न नहुने उर्दी हाँक्छ समाज । आफ्नी छोरीको विवाह भन्सारका सुव्वासँग गरिदिएर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई आदर्श जीवनको गीता सुनाउँछ समाज । वर्षभरि जुन स्रोतको समाचार लेख्छ र अन्तमा त्यही स्रोतबाट सम्मानित भएर समाचार छाप्ने स्तरको रखवारी गर्छ हाम्रो राज्यको चौथों अंग । ल्याजेस्फेयर युगमा बाँचेर गान्धीको आदर्शमा हिड्ने गजवको दाहोरो मानसिकतामा बाँचेको छ समाज । यही हिप्पोक्रेसीका कारण समाजका हरेक क्षेत्रका अगुवाहरुले आफूलाई हुँदै नभएको सादगी देखाउन यस्तै मिथ्यांकको खेती गर्ने गरेका छन् । यसरी बनाइएका तथाकथित गान्धीवादीबाट हामी सबै कुराको आशा गर्छौं, के यो सम्भव छ ?
हुनुपर्ने त के हो भने ब्लुमोनीले सबै धनी भएको समृद्ध मुलुक बनोस्् । हाम्रा नेताहरुसँग स्रोतले देखाउन मिल्ने अथाह सम्पत्ति होस् ताकि घुस र कमिशन खानु नपरोस् । राम्रा गाडी चढुन्, उपहारको ह्विस्की हैन, आफ्नै कमाइको हिस्की खान पुगोस्, ब्रान्डेड पहिरनमा सजिउन् , हामीले त यस्तै यस्तै समृद्धिको पो कामना गर्नुपर्छ । त्यसो गरेर हामीलाई कुनै नोक्सान हुँदैन । नोक्सान त के मा हुन्छ भने हुँदै नभएको गरीवी र सादगी देखाएर मुलुकका लागि चाँहि केही नगर्ने नालायकीपनबाट हुन्छ । मुलुकलाई अहिले गति चाहिएको छ, गरीवी देखाएर सादगीपन प्रदर्शन गर्ने दुर्गति हैन ।
मुलुकका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सम्पत्तिका नाममा तीन थान मोबाइल लेखाएर उनलाई तन्नम देखाउँदा कसकसको चित्त बुझ्यो, कसकसलाई हाम्रा त्यागी नेता भनेर आत्मरति मिल्यो ? त्यसको लेखाजोखा उनीहरु नै गरुन्, तर एउटा स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई तीनथान मोबाइलको धनी बनाएर त्यस्तो मुलुकको नागरिक हुनुमा कत्ति पनि गौरवको अनुभूति हुँदैन र भएको पनि छैन । ल, ठीकै छ उनी यति धेरै त्यागी छन् रे । तर, उनको यो सादगीपनले जनताको दैनिक जीवन र मुलुकको भविष्यका लागि के अर्थ राख्छ ? पानीको, दुधको, इन्धनको भाउ आकासिएर जनता पीडित छ , राहत दिन सकेको भए पो अर्थ राख्छ । चारैतिर लूटतन्त्र छ, त्यसलाई रोक्न सकेको भए पो अर्थ राख्छ । सर्वसाधारण जनता पलपलमा बेथितिको शिकार भएर बाँच्नुपरेको छ, त्यो रोक्न सकेको भए पोे अर्थ राख्छ । संविधानसभाको चुनाव भएको पाँचमहिना बितिसक्यो, त्यतातिर सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन, त्यसले गति पाए पो अर्थ राख्छ । हुनुपर्ने त के हो भने, हाम्रो प्रधानमन्त्री धनी बनुन्, कम्तीमा पनि महिनाको पाँचलाख तलव होस्, छुट्टि मनाउन गरीवका घर हैन, रारा र खप्तड जान सक्ने हुन् । तर, यति गरेर पनि मूल कुरो सुशील संक्रमणमा रहेको यो मुलुकको सरकार प्रमुख भएको जनतालाई प्रत्याभूति हुनुपर्यो ।
धेरै कांग्रेसजनलाई लागेको होला, सुशीलको यो सम्पत्ति विवरण मुलुकको सुशासनको लाइसेन्स हो । तर, त्यस्तो हैन र हुँदैन पनि । गरीवीको बिस्कुन सुकाएर सादगीको प्रमाणपत्र मिल्दैन । यी दुई फरक कुरा हुन् । नहुनुको अर्थमा गरीवी एउटा कुरा हो, सादगीपन अर्कै कुरा । यो मान्छेको बाँच्ने शैलीसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले सुशील कोइरालाहरुको मनोग्रन्थीसँगै हाम्रो समाजको प्याराडाइममा पनि सिफ्ट हुनुपर्यो । विचरा पात्रका रुपमा उभ्याएर भावुक हुनेभन्दा सक्षम र सबल पात्रलाई आदर्शका रुपमा उभ्याएर द्रुतगतिमा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतिर डोहोर्याउनुपर्यो ।
तर, दुर्भाग्य आज पनि हामी प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति तीनवटा मोबाइल भनेर म्यान बाइट्स डग पत्रकारिता गर्न, गराउन बाध्य छौं । संसार डोमिनेन्ट प्याराडाइमबाट सिप्m्ट भएर धेरै अघि अल्टरनेटिव प्याराडाइममा बढिसकेको बेला हामी यस्तो गरीव सोचमा भावुक भएर समृद्धिको सपना देख्छौं । के यसरी समृद्धि सम्भव छ ? छैन, त्यसैले सामाजिक रोगका रुपमा रहेको हिप्पोक्रेसीबाट मुक्त हुन जरुरी छ । यसो गर्न सक्यौ भने शायद नेपाली पत्रकारिता पनि एक स्तरको म्यान बाइट्स डग पत्रकारिताबाट माथि उठ्ला कि ? आगे ृनीहरु नै जानुन् ।
मंगलवार, २०७० चैत्र ०३ गते ०२:०१ / Tuesday, Mar 18, 2014 2:01 am